Rag ka tirsanaa Al-Shabaab ah oo lagu dilay dagaal ka dhacay Gobolka Sh/Hoose. - Latest News Updates
Rag ka tirsanaa Al-Shabaab ah oo lagu dilay dagaal ka dhacay Gobolka Sh/Hoose.
Muqdisho-Ciidamada xoogga dalka ayaa dilay Xubno sar sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab kadib markii uu dagaal ka dhacay Gobolka Sh/Hoose.
Al-Shabaab la dilay ayaa la sheegay in tiradooda ay gaareyso illaa iyo 35 ruux kuwaasi oo ay iskugu jiray saraakiil iyo Maleeshiyaad Shabaab ahaa sida ay caddeeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka.
Wararku waxay intaa ku darayaan in dilka xubnaha shabaabka ka mid ah uu yimid kadib markii ciidamada xoogga dalka ay qaadeen howlgal dhanka dhulka ah oo ciidamada ay kula wareegeen degaanka Gandarshe ee Gobolka Shabellada Hoose.
Taliyaha ururka 27Aad ee Guutada 1aad ee Ciidanka Xoogga Dalka G/lle Nuur Maxamed Gaabow Nuur ayaa sheegay in Howlgal dhanka dhulka ah ay Ciidamada Xoogga Dalka kula wareegeen Degaanka Gandarshe ee shabellada Hoose ay ku dileen xubno sar sare oo ka tirsanaa Al-Shabaan.
G/lle Nuur ayaa sheegay in ciidamada Xoogga Dalka ee howlaglka kula wareegay deegaanka Gandarshe ay ku gubeen saddex gaadiidK dagaalka ah.
Taliska ciidamada Xoogga dalka ayaa sheegay in dhowaan ay qaadayaan dagaal ka dhan ah Al-Shabaab kaasi oo looga saarayo dalka qeybaha ay ka joogaan.